आज २०७७ कात्तिक २७ गते बिहीवारको राशिफल – Nepali online news portal
आज २०७७ कात्तिक २७ गते बिहीवारको राशिफल
२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०८:०९ November 12, 2020 पाथिभरा संवाददाता
आज २०७७ कात्तिक २७ गते बिहीवार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ?तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
पारिवारिक वातावरण तपाईंको अनुकूल नभए पनि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने धन आर्जन हुनेछ। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ
आज चैते दशैँ,घरमा दुर्गा भगवतीको विशेष पूजाआजा
आज २०७८ वैशाख ७ गते मंगलबारको राशिफल
तपाईँको आजको राशिफल कति शुभ, कति अशुभ ?
आज २०७८ वैशाख ८ गते बुधबारको राशिफल
आज २०७७ असोज २९ गते बिहीवारको राशिफल
तिहार छठलगत्तै काठमाडौं उपत्यकामा कडा निषेधाज्ञा लागू गर्न सुझाव
कुखुरा बोक्ने गाडी ट्रकसगं ठोक्किदा तीन जनाको मृत्यु